कोइराला, सिंह र नि,धि मिल्दा देउवा र पौडेलको रा,जनीतिक भविष्य के होला ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कोइराला, सिंह र नि,धि मिल्दा देउवा र पौडेलको रा,जनीतिक भविष्य के होला ?
समाचार विश्लेषण । नेपाली काँग्रेसभित्र ७० क,टेका दुई नेता सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ ने,ता रामचन्द्र पौडेल फेरि पनि पा,र्टी ने,तृत्वका मुख्य दा,बे,दार हुन् । देउवा र पौडेलले यसपटकको महाधिवेशनलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको सम्भवत अ,न्तिम प्र,तिष्पर्धाका रुपमा लिएका छन् । काँ,ग्रेस सभापति भएर भावी प्रधानमन्त्रीको मार्ग सुनिश्चित गर्ने दा,उमा दुवै नेता छन् ।
देउवा पहिलोपटक काँ,ग्रेस पार्टी सभापति बनेका हुन् । उनी चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसके । वरिष्ठ नेता पौडेल अहिलेसम्म काँ,ग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै बन्न सकेका छैनन् । तर, उनी सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयको जि,म्मेवारी स,म्हालिसकेका भे,ट्रान नेता हुन् ।
देउवा र पौडेलको सभापतिमा दा,बी देखिएपनि उनीहरुपछिको पुस्ताले ने,तृत्व हस्तान्तरणका लागि आ,ग्रह गर्न थालिसकेका छन् । दुवै प,क्षका नेताहरुले सवोच्च नेता बनेर ने,तृत्व हस्तान्तरणको प्र,स्ताव गर्न थालेका छन् । यसरी देउवा र पौडेलभन्दा फरक नेता सभापति बनाउन ठुलो समुह काँ,ग्रेसभित्र स,क्रिय भइसकेको छ ।
काँ,ग्रेसमा फेरि वि,रासतको राजनीति गर्दै आएका नेताहरु ने,तृत्वमा पुग्न सक्रिय भएका छन् । काँ,ग्रेसका सं,स्थापक नेताहरु वीपी कोइरालाका पुत्र स,शांक कोइराला, गणेशमान सिंहका पुत्र प्रकाशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्र विमलेन्द्र निधि मुख्य प्र,तिष्पर्धीका रुपमा दे,खिनथालेका छन् । कोइराला परिवारका डा. श,शांक कोइराला पनि सभापतिका दा,बेदार हुन् । यसरी तीनवटा परिवारका सदस्य सभापतिको दा,बी गर्दै बढिरहँदा उनीहरुको मिलनको विषय पनि जो,डदार रुपमा उठिरहेको छ । तीन परिवार मिलेमा देउवा र पौडेलमाथि द,बाब सृ!जना हुने कतिपय काँ,ग्रेस नेता कार्यकर्ताको बु,झाई छ।
वास्तवमा देउवाको आधा शक्ति विमलेन्द्र नि,धि हुन् । पौडेलको लगभग ९० प्रतिशत शक्ति डा. स,शां,क कोइराला, डा. शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह नै हुन् । उनीहरुले साथ छा,डेर तीन परिवारको एकता बनाएर बढेमा देउवा र पौडेलले सभापतिको चु,नाव ल,ड्न ठुलै हि,म्मत निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ । उनीहरुको बे,मेलले मात्र देउवा र पौडेलको प्र,तिष्पर्धाको मा,होल बन्न सक्छ ।
काँ,ग्रेसभित्र कोइराला, सिंह र नि,धिबीचको स,म्भावित एकतालाई लिएर ब,हस हुन थालेको छ । तीनजना ने,ताको औ,पचारिक अ,नौपचारिक भेटघाट हुन थालेको छ । एक अर्कामा रा,जनीतिक ले,नदेन गरी एकै ठाउँमा आउनेबारे उनीहरुबीच छलफल समेत चलेको छ । यो सम्भव भएमा देउवा र पौडेल सर्वोच्च नेता बन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । या त भविष्यमा राष्ट्रपतिको दा,बेदार बनेर दोस्रो पुस्ताका ने,ताहरुलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।
कोइराला, सिंह र नि,धिबीच रा,जनीतिक ले,नदेनबाट सहमति बन्ने सम्भावना सजिलो भने छैन । तीनैजना उस्तै उमेरका हुन् । आफ्नै दा,बी प्रस्तुत गरेर महाधिवेशनको तयारीमा छन् । यी तीनबीच पार्टी र सरकार सञ्चालनमा फरक फरक व्यक्तिले गर्ने सहमति बन्ने स,म्भावना भने छँदैछ । तर, कस्ले त्याग्ने भन्ने विषय आउन सक्छ । प्रकाशमान सिंह आफ्ना पिता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री पद नै त्या,गेको बताउँदै सधै आफूहरुले मात्र त्या,ग्नुपर्ने ? भन्न थालेका छन् । शशांक कोइराला बाबु वीपीको लाइनमा काँ,ग्रेसलाई चलायमान बनाउने ए,जेन्डाका साथ सक्रिय छन् । निधि मधेशी समुदायबाट पहिलोपटक देशको प्र,धानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । यसरी तीनैजनाको आफ्नै चाहना र मह,त्वाकांक्षा छ । तर, तीनैजनाले पार्टीलाई बलियो बनाउन ने,तृत्व परिवर्तन अनिवार्य छ भन्नेमा सहमति जनाएका छन् । यही सहमतिमा उनीहरुबीच मि,लनबिन्दु तयार गर्ने सम्भावना बलियो छ । तर, त्यो सजिलो भने छैन ।
Previous पोखरीमा डु,बेर दुई छोरा गुमाएपछि दिनरात रोएरै बिताउछिन् कमला, पाइनन् अझै राहत!
Next कसरी थाहा पाउने को’रोनाको सं’क्रमण कि रु,घाखोकी ?